शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण – Karnali Online
karnalionlineadmin	July 28, 2018 0
काठमान्डौ, आगामी असोजदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । सो कार्यविधिको काम एक महिनामा सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसलगतै ऋण वितरण कार्य सुरु हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भने, ‘एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाउने काम सकिन्छ, त्यसपछि ऋण दिने काम सुरु हुन्छ ।’ कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै बैंकले ऋण दिन सुरु गर्ने उनले बताए ।
भदौसम्म कार्यविधि बनाउनै समय लाग्ने भएकाले असोज लागेपछि विद्यार्थीले शैक्षिक पत्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिमा कर्जाको बिमा, असुलउपर गर्ने आधार, कसले के काम गर्ने भन्ने विषय समावेश भएकाले बैंकलाई कर्जा दिन समस्या नपर्ने प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण दिने सक्ने उल्लेख छ । पढेका युवालाई उद्यमशीलतामा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो कर्जा योजना ल्याइएको हो । ओली सरकारकै पालामा यसभन्दा अघि पनि यस्तो कर्जा योजना ल्याइएको थियो । यस्तो ऋण वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । ‘पहिलेको प्रभावकारी नभएर त अहिले कार्यविधि बनाएर यस्तो ऋण दिन लागिएको हो ’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।
कार्यविधि बनिसकेपछि संसद बाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाउने कर्जादेखि थुपै्र कार्यविधि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेकाले एकैचोटि संसदमा पेस हुँदै छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, ऋण असुलीसम्मका प्रक्रियालाई सो कार्यविधिमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौसम्म कानुनी आधार तयार भइसक्छ । त्यसपछि बैंकले सहुलियत दरमा ऋण दिन सुरु गर्नेछन् ।
भदौसम्म कार्यविधि बनाउनै समय लाग्ने भएकाले असोजपछि विद्यार्थीले शैक्षिक पत्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने बजेटमा भएको घोषणाबारे कुनै पनि सम्बोधन गरेन । कार्र्यविधि बनेपछि कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।
यसभन्दा पहिले ल्याइएको यस्तो शीर्षकको कर्जा प्रभावकारी नभए पनि यसपालि कार्यविधि बनाएर ल्याउन लागिएकाले सफल हुने बैंकर्सको विश्वास छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘उचित कार्यविधि बनाएर आएपछि सफल होला भन्ने लागेको छ ।’ यसअघिको यस्तो ऋण योजनामा ऋण कसरी असुली गर्ने भन्ने आधार नभएर बैंकलाई ऋण दिन समस्या परेको नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओसमेत रहेका ढुंगानाले बताए । प्रमाणपत्र धितो विश्वासका लागि मात्र भएको र बैंकलाई साँवा र ब्याज तिर्ने ग्यारेन्टी नभएकाले पनि यसभन्दा पहिले ल्याइएको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सकिएको थिएन ।
कर्जा लगानी गरेपछि त्यसको सावाँ र ब्याज तिर्न सक्ने आधार बैंकहरूलाई चाहिन्छ । तर, यस शैक्षिक कार्यक्रममा बैंकको ऋण असुल उपर गर्ने कुनै आधार नभएकाले बैंकर यस्तो खालको ऋण दिन इच्छुक छैनन् । यसखालको कर्जा वितरणको स्पष्ट मोडालिटी नै छैन । त्यति मात्र होइन यस्तो खालको कर्जा लिने विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने तथा यस्तो कर्जा लिँदा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने बैंकहरूको भनाइ छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचभन्दा बाहिर भएकाले यस्तो खालको कर्जा दिन समस्या परेको बैंकर्स बताउँछन् । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेपछि क्यास फलो हुने गरी लगानी गर्न चाहान्छन् । तर, ब्याज त के सावाँ पनि असुलउपर गर्न सक्ने आधार नभएको ठाउँमा लगानी गर्न बैंक पटक्कै इच्छुक छैनन् । त्यसैले यसअघिको यस्तो कर्जा योजना असफल भएको हो ।
सरकारले बेलाबखतमा ल्याउने गरेका सहुलियत दरका यस्ता ऋणसम्बन्धी योजना प्रायः असफलतर्फ उन्मुख भएका छन् । उचित अध्ययन र गृहकार्यबिना ल्याइएका यस्ता ऋणसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखिएको छ ।
स्रोत राजधानी डेलि
सल्लीबजार मा जिप दुर्घटना ,२ जना गम्भीर घाइते
झापाका यी युवक जसले भारतीय पेन्सिललाई चुनौती दिन बिदेशी बैंकको जागिर छोडेर नेपाल मै खोले पेन्सिल उद्योग (भिडियो)
karnalionlineadmin	July 29, 2018
उदयपुरमा ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज
karnalionlineadmin	July 21, 2018
मृतक १६ वर्षीय छोराकाे सम्झनामा यी बाबुले पुरे सडकका ५ सय ५६ खाल्डा, देशभरिकाे सडककाे खाल्डा पुर्ने लिए लक्ष्य
इन्डोनेसिया मा शक्तिशाली भूकम्प ,१० जनाको मृत्यु दर्जनौ घाइते
karnalionlineadmin	July 31, 2018
डा. केसी र सरकार बीच बार्ता सफल
karnalionlineadmin	July 26, 2018
अन्तत विवाद मा परेका कानून मन्त्रीले दिए राजिनामा
karnalionlineadmin	July 24, 2018
बानेश्वरको दृष्य : वारी डा. केसीको समर्थनमा कोण सभा, पारी तरुण दल र प्रहरी झडप
आलमकाे निधनमा शोक प्रस्ताव
karnalionlineadmin	July 17, 2018
पाकिस्तानमा चुनावी हिंसा रोकिएन
karnalionlineadmin	July 15, 2018
गाजामा सन् २०१४ यताकै ठूलो हमलाः इजरायल
ट्रम्पले ब्रिटेनलाई दिए इयुविरुद्ध मुद्दा हाल्ने सुझाव
Karnalionline.com | All Rights Reserved |